Kirin 710 chipset ကို Huawei မိတ်ဆက် | Myanmar Mobile App
Home Trending Smartphone Kirin 710 chipset ကို Huawei မိတ်ဆက်
Kirin 710 chipset ကို Huawei မိတ်ဆက်
ံစမတ်ဖုန်း ထုတ်လုပ်သူ Huawei အနေနဲ့ အလယ်အလတ်ဆင့် စမတ်ဖုန်းဖြစ်တဲ့ Nova 3i ဖုန်း မိတ်ဆက်ခြင်းနဲ့အတူ ကုမ္ပဏီရဲ့ကိုယ်ပိုင်ထုတ်ဖြစ်တဲ့ HiSilicon Kirin 710 chipset ကိုပါ တစ်ပါတည်း မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ nova 3i မှာစတင်သုံးစွဲလာတာ ဖြစ်ပါတယ်။ Huawei အနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်ကထုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့ 16nm Kirin 659 SoC ပြီးနောက် အချိန်အတော်ကြာတဲ့ အချိန်မှာ Kirin 710 ကိုထုတ်ပေးလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကင်မရာ စွမ်းဆောင်ချက်ပိုင်းအတွက်လည်း DSP နဲ့ ISP ပိုင်းကိုတိုးမြင့်ပေးလိုက်ပြီး low-light အခြေအနေမှာ အရုပ်တွေကို ပိုမှန်ကန်အောင် ရိုက်ကူးလာနိုင်မှာပါ။ scene recognition နဲ့ face unlock တွေကိုလည်း ထောက်ပံ့ပေးလာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အခြားစွမ်းဆောင်ချက်တွေအနေနဲ့ dual SIM နဲ့ dual 4G VoLTE ထောက်ပံ့ဖို့ LTE Cat. 12 နဲ့ Cat. 13 သုံးထားပါတယ်။
Kirin 710 ဟာ12nm node နဲ့ဖြစ်ပြီး စွမ်းဆောင်ချက်ပိုင်းမှာ ပိုကောင်းလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က ထွက်ခဲ့တဲ့ ပရိုဆက်ဆာထက် single-core မှာ 75% ရာခိုင်နှုန်းပိုကောင်းလာပြီး၊ multi-core မှာတော့ 68% ရာခိုင်နှုန်း ပိုမြန်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ 2.2GHz အမြန်နှုန်းရှိတဲ့ Cortex-A73 cores နဲ့ 1.7GHz အမြန်နှုန်းရှိတဲ့ Low-power Cortex-A53 cores တို့ကြောင့် စွမ်းဆောင်ရည်ပိုင်းမှာ လေးဆနီးပါး မြန်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ GPU ရဲ့စွမ်းဆောင်ချက်ကလည်း 1.3 ဆနီးပါး ပိုမြန်လာမှာပါ။ Nova 3i မှာ ၆.၃ LCD FullHD+ Display တပ်ဆင်ထားပြီး မျက်နှာပြင် အချိုးမှာ 19:9 ဖြစ်ပါတယ်။
စမတျဖုနျး ထုတျလုပျသူ Huawei အနနေဲ့ အလယျအလတျဆငျ့ စမတျဖုနျးဖွဈတဲ့ Nova 3i ဖုနျး မိတျဆကျခွငျးနဲ့အတူ ကုမ်ပဏီရဲ့ကိုယျပိုငျထုတျဖွဈတဲ့ HiSilicon Kirin 710 chipset ကိုပါ တဈပါတညျး မိတျဆကျပေးလိုကျပါတယျ။ nova 3i မှာစတငျသုံးစှဲလာတာ ဖွဈပါတယျ။ Huawei အနနေဲ့ပွီးခဲ့တဲ့ နှဈကထုတျလုပျခဲ့တဲ့ 16nm Kirin 659 SoC ပွီးနောကျ အခြိနျအတျောကွာတဲ့ အခြိနျမှာ Kirin 710 ကိုထုတျပေးလိုကျတာ ဖွဈပါတယျ။
ကငျမရာ စှမျးဆောငျခကျြပိုငျးအတှကျလညျး DSP နဲ့ ISP ပိုငျးကိုတိုးမွငျ့ပေးလိုကျပွီး low-light အခွအေနမှော အရုပျတှကေို ပိုမှနျကနျအောငျ ရိုကျကူးလာနိုငျမှာပါ။ scene recognition နဲ့ face unlock တှကေိုလညျး ထောကျပံ့ပေးလာမှာ ဖွဈပါတယျ။ အခွားစှမျးဆောငျခကျြတှအေနနေဲ့ dual SIM နဲ့ dual 4G VoLTE ထောကျပံ့ဖို့ LTE Cat. 12 နဲ့ Cat. 13 သုံးထားပါတယျ။
Kirin 710 ဟာ12nm node နဲ့ဖွဈပွီး စှမျးဆောငျခကျြပိုငျးမှာ ပိုကောငျးလာမှာဖွဈပါတယျ။ ပွီးခဲ့တဲ့နှဈက ထှကျခဲ့တဲ့ ပရိုဆကျဆာထကျ single-core မှာ 75% ရာခိုငျနှုနျးပိုကောငျးလာပွီး၊ multi-core မှာတော့ 68% ရာခိုငျနှုနျး ပိုမွနျလာမှာ ဖွဈပါတယျ။ 2.2GHz အမွနျနှုနျးရှိတဲ့ Cortex-A73 cores နဲ့ 1.7GHz အမွနျနှုနျးရှိတဲ့ Low-power Cortex-A53 cores တို့ကွောငျ့ စှမျးဆောငျရညျပိုငျးမှာ လေးဆနီးပါး မွနျလာမှာ ဖွဈပါတယျ။ GPU ရဲ့စှမျးဆောငျခကျြကလညျး 1.3 ဆနီးပါး ပိုမွနျလာမှာပါ။ Nova 3i မှာ ၆.၃ LCD FullHD+ Display တပျဆငျထားပွီး မကျြနှာပွငျ အခြိုးမှာ 19:9 ဖွဈပါတယျ။
Previous articleIFA 2018 မှာစမတ်ဖုန်းသစ်ကို မိတ်ဆက်ဖို့ ပြင်ဆင်နေတဲ့ Sony
Next articleအိန္ဒိယဈေးကွက်မှာ ဖြန့်ချိလိုက်တဲ့ Vivo NEX စမတ်ဖုန်း